Zakariye Ismaaciil oo Muqdisho laga dejiyay, Kenya oo fashilantay - iftineducation.com
Zakariye Ismaaciil oo Muqdisho laga dejiyay, Kenya oo fashilantay
aadan21 / January 1, 2015
iftineducation.com – Hay’adda Nabad Suggida Qaranka, ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay Sakariye Ismaaciil Xersi, oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee Al-Shabaab, kadib markii shalay ay si qasab ah ula wareegeen ciidamada Kenya, balse cadaadis la saaray kadib usoo gudbisay Muqdisho.
Sarkaalkaan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho kasoo dejisay diyaarad gaar ah oo kasoo duulisay gobolka Waqooyi Bari Kenya, xili Dowladda Kenya ay ku fashilantay inay la wareegto sarkaalkaan si ay su’aallo u weydiiso.
Sakariye waxaa magaalada Muqdisho lala keenay Aadan Maxamed Maxamuud (Jilbo Weyne), oo Xoghayntiisii ahaa, isla-markaana lala soo qabtay maalintii Sabtida. sidoo kale waxaa la socdo Aadan Maxamed Xiireey, oo la shaqayn jiray Sakariye, isla-markaana gadaal kaga soo biiray in lala geeyo, goob kastaa oo ninkaasi la gaynaayo.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ee Gobolka Gedo, Col. Cabaas Ibraahim Gurey, ayaa wuxuu xaqiijiyay in Sakariye ay si buuxdo ula wareegtay Hay’adda Nabad Suggida Qaranka, si su’aalo ay u weydiiso.
Wax war ah kama soo bixin Hay’adda Nabadsugida Qaranka oo ku aadan la wareegida sarkaalkaan ka tirsanaa Al-Shabaab.
Bishii June ee sanadkii 2012-ka, ayay ahayd markii Dowladda Mareykanka ay madaxa Sakariye dul dhigtay adduun lacageed oo dhan saddex milyan oo lacagta Mareykanka ah ($3,000,000US).
Qofaa jeclaatay haduu kugu daadiyo sidan uga aarso-Daawo muuqaal qosol badan
Ka hortaga Tahriibka oo B/weyne loogu hadlay: Sawirro